Tanin'i Israely - Wikipedia
Sarin-tany maneho ny Fanjakan'i Israely sy ny Fanjakan'i Jodà tamin'ny taona 926 tal. J.K.
Ny Tanin'i Israely dia faritra ara-jeografia mahafaoka ny Fanjakan'i Israely sy ny Fanjakan'i Jodà, izay tany nipoiran'ny vahoaka jiosy. Atao hoe ארץ ישראל / Eretz Israel izy amin'ny teny hebreo (na hebrio).
Ao amin'ny Baiboly ny "Tanin'i Israely" dia:
teny ara-pivavahana ny hoe satria manondro ny fanomezan' Andriamanitra; ampiasaina voalohany izany ao amin'ny Boky voalohan'i Samoela (1Sam. 13.19) ;
teny ara-jeografia koa; ny famaritana ara-jeografia omen'ny Baiboly anefa tsy dia mazava loatra: ao amin'ny lahatsoratra sasany dia misy filazana ny Tany nomena izay toa manomboka any amin'ny "onin'i Ejipta hatrany amin'ny ony lehibe, dia ny onin'i Eofrata" (avy any Ejipta hatrany Iràka ankehitriny izany), ny lahatsoratra sasany milaza faritra eo anelanelan'ny ranomasina sy ny ony Jordàna, izay mifandraindraika amin'ny faritra atao hoe Palestina;
teny ara-politika koa: izany dia tany nomena ny Jiosy mba honenany, avy eo nanomboka tamin'ny mpanjaka Saoly (na Saola) mba hanorenana fanjakana.
Ny teny hoe "Tanin'i Israely" dia ampiasain'ny Jiosy sy ny Kristiana nandritra ny tantara. Io Tanin'i Israely io koa dia atsoin'ny Jiosy hoe "Tany nampanantenaina" mba hampahatsiahivana ny fampanantenana voalohany nataon'Andriamanitra tamin'i Abrahama sy i Isaka ary i Jakoba nilazany ny hanomezany io tany io ho azy ireo sy ho lovan'ny taranak'izy ireo, araka ny voasoratra ao amin'ny Bokin'ny Genesisy (Gen. 17.8).
Ny anarana hoe "Tany Masina" dia ampiasain'ny Kristiana mba hampahatsiahivana ny fiainan'i Jesoa.
Taorian'ny fanaovan-tsesitany maro dia niparitaka manerana izao tontolo izao ny vahoaka jiosy. Misy fifamatorana ara-panahy mafy anefa ny "Fanambaràna ny fahaleovantenan' ny Fanjakan'i Israely" ankehitriny izay mampifandray azy amin'io tany io.
↑ "Ary teny amin' ny tanin' ny Isiraely rehetra tsy nisy mpanefy; fa hoy ny Fifistina: Andrao manefy sabatra na lefona ny Hebreo." (1Sam. 13.9, Ny Baiboly)
↑ "Tsy nisy mpanefy teo amin' ny tanin' Israely rehetra, fa nataon' ny Filistina hoe: Aoka ny Hebrio tsy hahazo manefy sabatra na lefona intsony." (1Sam. 13.9, Ny Baiboly Masina)
↑ Jereo: Genesisy 15-18.
↑ "Ary homeko anao sy ny taranakao any aorianao ny tany fivahinianao, dia ny tany Kanana rehetra, ho fananana mandrakizay; ary ho Andriamaniny Aho." (Gen. 17.8, Ny Baiboly)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanin%27i_Israely&oldid=978192"
Voaova farany tamin'ny 5 Desambra 2019 amin'ny 12:11 ity pejy ity.